Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay Xasan Sheekh Max'ud..? (Akhriso Taariikhdiisa) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis. Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay Xasan Sheekh Max'ud..? (Akhriso Taariikhdiisa) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xasan Sheekh ayaa wareeggii saddexaad ee doorashada kaga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey, isagoo ku guuleystay 214 cod, halka Farmaajo uu keensday 110 cod.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, kadib doorasho saddex wareeg ah oo ka dhacday magaalada Muqdisho.
Taariikhda Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha 10-aad
Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu ahaa Madaxweynihii siddeedaad (8) ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii u dhaxeysay 2012—2017. Burburkii 1991 ee kaddib Madaxweynihii kowaad ee loo doorto in uu hoggaamiyo Xukuumad aan kumeel gaar ahayn ayuu noqday.
Wuxuu Ku dhashay 1955 degmada Jalalaqsi ee bartamaha gobolka Hiiraan. Haldoor u dhaqdhaqaaqa dhab u heshiisiinta, bulshada rayidka iyo u ololeeye waxbarashada iyo barbaarinta ubadka ayuu ahaa muddo dheer. Kaddib bud— dhige iyo maamulaha Mac’hadka SIMAD oo markii dambe Jaamacad isu badelay ayuu noqday. 2012 ayaa loo doortay Madaxweyanaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. 2013 ayaa Jariiradda TIME u aqoonsan tahay boqolka qof ee dunida ugu saameynta badan ee raadka reebtay.
Wuxuu wax ka asaasay bulsho rayid ah oo qeyb ka noqota xal waara u raadinta dalka si la iskugu soo dhaweeyo dagaal oogayaashii dalka iyo caasimadda Muqdishu maamulayey. Ururadii bulshada rayidka ee Maxamuud, wax ka asaasay weli qeybo ayaa shaqeeya.
1999-kii Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu wax ka aasaasay Mac’hadda Maamulka iyo Maareynta Horumarinta (SIMAD) oo markii dambe Jaamacad weyn oo hadda saddex iyo labaatan(23) sano jirsatay noqday. Maxamuud ilaa 2010 wuxuu ahaa maamulaha Jaamacadda SIMAD.
2001 ayuu Maxamuud, ku biiray Xarunta Cilmi Baarista iyo Wadatashiga Soomaliyeed (CRD) asagoo Cilmi Baare Sare oo Nabadda iyo dib—u—dhiska ka noqday.
2011 ayuu Maxamuud siyaasadda u xuubsiibtay. Wuxuu dhisay Xisbiga Nabadda iyo Horumarinta. Xubnaha Xisbiga ayaa u doortay April 2011 in hoggaamiyo Xisbiga saddexda (3) sano ee ugu horreysa.
Bishii August 2012, ayaa loo doortay Xildhibaan Golaha Shacabka ka tirsan ee Baarlamaankii sagaalaad (9) ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
September 10, 2012 ayaa Xildhibaanada Soomaaliyeed u doorteen Madaxweynihii siddeedaad (8) ee dalka.
Wuxuu ku fashilmay dib loo doorto, isagoo Bishii February 2017, isagoo xilka ku wareejiyey Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmajo oo Doorashada uga adkaaday, wuxuuna muddo 5 sano ah ka tirsanaa mucaaradka halganka la galay dowladii Farmaajo.
Ugu danbeyn waxaa 15 May 2022 loo doortay Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya, isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee mar kale xilka loo doorto.
Previous articleXasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay Madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya
Next articleItoobiya iyo UK oo noqday dowladihii ugu horeeyay ee u hambalyeeyay Xasan Sheekh